हंगकंग बिरुद्द नेपालको सानदार जित, के सुपर सिक्समा पुग्यो त ? « Sajha Page
हंगकंग बिरुद्द नेपालको सानदार जित, के सुपर सिक्समा पुग्यो त ?
काठमाडौं । आइसीसी विश्वकप छनोट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले हङकङमाथि जित निकालेको छ।
जिम्बाव्बेको बुलाबायोस्थित एथ्लेटिक मैदानमा १५४ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपालले हङकङमाथि ५ विकेटले विजय हात पारेको हो। ४०.४ ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै १५५ रन ल्याएर नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा जित हासिल गर्न सफल भएको छ । यो संगै अफगानिस्तान, हंगकंग र नेपालको समान २-२ अंक भएको छ भने स्कटल्याण्ड र जिम्वाबेको ६-६ अंक रहेको छ ।
यो जितसँगै नेपालले एकदिवसिय मान्यता पाउने सम्भावना पनि कायमै राखेको छ ।
जिम्बावे स्थित एथ्लेटिक क्लवमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको हङकङ ४८ ओभर २ बलमा १ सय ५३ रन बनायो । हङकङका लागि निजाकत खानले ४७, बाबर हायातले २० तथा क्रिस्टोफर कार्टर ९ तथा तनवीर अफ्जरले १० रन बनाए । उसको २६ रन हुँदा नेपालका लागि बसन्त रेग्मीले पहिलो सफलता दिलाए । त्यसपछि हङकङको स्कोर ५३ रन हुदा बाबर हायातलाई सोमपाल कामीले पेभेलियन फर्काए ।
जवाफमा नेपालले ४० ओभर ४ बलमा ५ विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो । गतिलो सुरुवात गरेको नेपालको मिडिल अडरका खेलाडीले राम्रो खेल्न सकेनन । ४१ रन हुदा पहिलो विकेट गुमाएको नेपालले ६६ रन बनाउँदा ५ विकेट खेर फाल्यो । नेपालका अनिल शाहले २६ ज्ञानेन्द्र मल्ल र दिपेन्द्र एरीले समान १२-१२ रन बनाए ।
तर रोहित पौडेल र सोमपाल कामीले ८९ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई जित दिलाए । रोहितले अविजीत ४८ रन बनाए भने सोमपालले ३७ रन बनाए । नेपालको जीतसँगै अफगानिस्तानले समुह बी बाट सुपरसिक्समा पुगेको छ । सुपरसिक्समा पुग्न नसकेका ४ टोलीबीच सातौं स्थानका लागि क्रश प्लेअफ हुनेछ । समूह ‘ए’मा चौंथो हुने टोलीले समूह ‘बी’को पाँचौं र समूह ‘बी’मा चौंथो हुनेले र समूह ‘ए’को पाँचौं टोलीसँग प्लेअफ खेल्नेछन् ।
समुह ए बाट पनि युएई आयरल्याण्डसँग पराजित भएपछि एकदिवसिय मान्यताका लागि ३ देशको दावेदारीत रहेको छ । जसमा नेपाल युएई र हङकङ छन । अब सातौ स्थानको प्लेअपका लागि यी ३ टिमविच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने हार्ने दुईले नवौं स्थानका लागि आमनेसामने हुनेछन् ।
यदि प्लेअफको पहिलो खेल जितेमा सातौं स्थानका लागि हुने खेल पनि जितेर एकदिवसीय मान्यता पाउन सक्नेछ ।